Wararka Maanta: Arbaco, Sept 15, 2021-Hay'ada Caymiska Somaliland oo ka jawaabtay in caymiskii baabuurta la joojiyay
Bukhaari ayaa sheegay in ay hore ula heshiiyeen baabuurlayda mudo kahor isla markaana inta wixii ka danbeeyay ay ku jireen hirgalinta caymiska baabuurta.
"Sida cad 24 bishii 7aad ayaanu go'aanka soo saarnay bulshadu way ogayd, waanu u sababaynay, way ku qanceen, wixi ka danbeeyay waxaanu wadnay siduu u bilaabmi lahaa, waxa Alxamdulilaahi ah in maanta uu ka bilaabmay caymiskii Dekedda Berbera gaadiidka kasoo dagaya iyo gadiidka galaya labadaba" ayuu yidhi Bukhaari.
Bukhaari ayaa intaa ku daray in baabuurlayda qaarkeed ay shalayba qaateen caymiska isla markaana maantana ay qaar kale u diyaar yihiin.
"Shalay gaadiid ayaa qaatay caymiska maantana diyaar ayay u ahaayeen, waxa jiray warar war xumo tashiil ah, ama warar aan xaqiiqo ahayn, oo markii shaqada in la bilaabo la doonayay Dekedda Berbera ku faafay, oo ah in howshi caymiska la joojiyay, waxaanu u sheegayna bulshada go'aankaa wax badalay ma jiro" ayuu yidhi Bukhaari.
Xukuumada Somaliland ayaa maanta bilowday hirgalinta caymiska baabuurta xamuulka ah iyo baabuurta kasoo dagaysa Dekedda Berbera oo ay horay u sheegtay in maanta oo ah 15 September la waajibin doono.